जब बैंकले भुलबस ग्राहकका खातामा पठायो २१ अर्ब ! - Himali Patrika	जब बैंकले भुलबस ग्राहकका खातामा पठायो २१ अर्ब ! - Himali Patrika
१८ पुस, काठमाडौं । यदि तपाइँको खातामा अचानक लाखौँ रुपैयाँ आयो भने के गर्नुहुन्छ ? वित्तीय अपराध धेरै हुने अहिलेको जमानामा यसरी बैंकमा अकस्मात ठूलो रकम आउँदा खुसी भन्दा धेरै डर लाग्नु स्वभाविकै हो । कहिलेकाहीँ स्वयं बैंकले पनि गल्तीले ग्राहकको खातामा मोटो रकम पठाउँदो रहेछ । बेलायतमा हालै एउटा यस्तो घटना भएको छ ।
बेलायतको Stander बैंकले ७५ हजार जनाका बैंक खातामा भुलबस २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम पठाएको छ । आफ्नो खातामा अकस्मात बैंकबाट पैसा आएपछि ग्राहकहरु खुसी भए । तर पछि उक्त रकम बैंकको गल्तीले पठाइएको थाहा पाएतापनि धेरै मानिसले पैसा फिर्ता गर्ने जाँगर चलाएका छन् ।
रोचक त के भने सानट्याण्डर बैंकले त्यो रकम आफ्ना प्रतिस्पर्धी बैंकहरु द्यबचअअबिथक, ल्बतधभकत, ज्क्द्यऋ, ऋययउभचबतष्खभ द्यबलप तथा भर्जिन मनी लगायतका ग्राहरुहरुको खातामा पठाएको थियो । तर ती ग्राहकहरुले पैसा फिर्ता गर्न नमान्दा बैंकलाई घाटा बेहोर्नुपर्ने चिन्ता थपिएको छ ।